नेपालमा अर्को बि’पत्ति : अनौठो रो’गका कारण ५ जनाको भटाभट नि’धन भएपछी गाउँले त्र’सित ! « Online Tv Nepal
नेपालमा अर्को बि’पत्ति : अनौठो रो’गका कारण ५ जनाको भटाभट नि’धन भएपछी गाउँले त्र’सित !
Published : 20 March, 2020 7:21 am
एक्काइसौँ शताब्दीमा मानव सभ्यतामाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर देखापरेको स’मस्या हो कोरोनाभा’इरसको म’हामारी । यो एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित म’हामारी नभएर विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा ल’पेटिरहेको म’हामारी पनि हो । यस अर्थमा यो म’हामारी अत्यन्तै ख’तरनाक पनि छ । अत्यन्तै आ’क्रामक ढङ्गले सर्ने र शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसलाई कालको ग्रास बनाउने यो म’हामारीलाई कोभिड–१९ नाम दिइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वलार्ई नै आ’तङ्कित बनाइरहेको कुरा सत्य हो । तर यो भा’इरसको वास्तविक यथार्थ जे हो, त्यहीअनुसार यसलाई देखाउने र प्रस्तुत गर्ने काम भने भइरहेको छैन । यो भा’इरसका ख’राब पक्ष, जुन कतिपय यथार्थमा आधारित पनि छन् र कतिपय चाहिँ भ्रममा, उछाल्ने काम पनि भइरहेको छ ।
यसै क्रममा महोत्तरीमा जिल्लाको मनरासिस्वा नगरपालिकाको मनरा गाउँमा पछिल्लो तीन दिनमा पाँचको नि’धन भएको छ । नगरपालिका–१ साविकको मनरा गाउँका ५० वर्षीय ब्रह्मदेव मण्डल, ५५ वर्षीय राघो मण्डल, ४५ वर्षीय सुखचन्द्र मण्डल, ५० वर्षीय विकास मण्डल र ५५ वर्षीय गङ्गा सिंहको नि’धन भएको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शशीभूषण चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत मङ्गलबारदेखि अचानक उनीहरु बि’रामी हुँदै र उपचार हुँदाहुँदै पनि सि’किस्त अवस्थामा पुगेर एकपछि अर्को गरी पाँचै जनाको नि’धन भएको हो । एक्कासि बि’रामी भएर भटाभट भएको उनीहरुको नि’धन ले पूरै मनरा गाउँवासी आ\_तङ्कित भएका छन् । उनीहरुको नि’धन को कारणलाई लिएर विभिन्न अ’ड्कलबा’जी भइरहेको छ ।
नि’धन हुने पाँचमा चार जना दलित र एक जना उच्च जातिका रहेका छन् तर उनीहरुको नि’धन भने ‘वि’षा’क्त म’दि’रा से’वन’बाट भएको वडाध्यक्ष चौधरीको जिकिर छ । उहाँका अनुसार उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनीहरुको नि’धन ‘म’दि’रा से’व’न’बाट भएको बताएका छन् । महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले उनीहरुको नि’धन म’दि’रा से’व’नबा’ट नभई अर्कै कारणले भएको हुनसक्ने आ’शङ्का गर्नुभएको छ ।
वास्तविकता जे रहे पनि एउटै गाउँमा तीन दिनभित्र पाँच जनाको नि’धन भएपछि गाउँले त्र’सित छन् भने डरले गर्दा सबै आआफ्नै घरमा सीमित हुन थालेको स्थानीयवासी रवीन्द्र भगतले बताउनुभयो ।